Ahoana ny fomba hanoloran-tena an'i Honduras amin'ny fivoaran'ny fizahan-tany?
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia any Honduras » Ahoana ny fomba hanoloran-tena an'i Honduras amin'ny fivoaran'ny fizahan-tany?
Na dia iray amin'ireo firenena any Amerika Afovoany ambanin'ny tany radara aza i Honduras, dia mandroso amin'ny sehatry ny fizahan-tany. Ny firenena dia nankafy ny fitomboan'ny fahatongavan'ireo fizahan-tany nandritra ny taona vitsivitsy lasa izay, izay nandraisana mpitsidika maherin'ny roa tapitrisa tamin'ny taona 2017, izay maneho 700 tapitrisa dolara amin'ny fandaniana fizahan-tany. Ny fanaterana fitsangantsanganana an-dranomasina ao amin'ny firenena dia mpamily lehibe indrindra amin'ny indostrian'ny fizahantany, miaraka amin'ireo sambo fitsangantsanganana vaovao maro tonga tamin'ny taona 2017. Honduras koa dia nitombo ny fifandraisany ary nanambara ny fivoaran'ny hotely vaovao. Ireto ambany ireto ny zava-bita farany indrindra ho an'ny Ivon-toeran'ny fizahantany Honduras:
Ny seranam-piaramanidina iraisampirenena Juan Manuel Galvez ao Roatan dia tsy ho ela dia hanao fanavaozana maro ao anatin'izany ny fanitarana ny làlambe sy tranobe vaovao ho an'ny mpandeha. Ireo fanavaozana ireo dia hahafahan'ny seranam-piaramanidina mandray fiaramanidina bebe kokoa, ary koa ny fanatrehana tsara ny mpandeha. Dingana lehibe iray hafa ho an'i Honduras dia ny fanampiana Air Europa manolotra sidina mivantana isan-kerinandro avy any Madrid, Espana, hatrany San Pedro Sula, Honduras. Ity zotra vaovao ity dia namela fifandraisana bebe kokoa ho an'ny firenena mankany amin'ny toeran-tany 20 eropeana sy fantsona fivarotana mihoatra ny iray arivo ho an'ny marketing ny tapakilan'ny fiaramanidina. Ny sidina Air Europa isan-kerinandro dia nanomboka ny volana aprily 2017 raha mihoatra ny 85 isan-jato ny sidina. Nanomboka teo dia nanitatra ny fahafahan'ny fiaramanidina tamin'io zotra io ny Air Europa tamin'ny alàlan'ny Airbus 330-300 afaka mandray mpandeha 388, nanampy 89 seza hafa. Ny mety hampiakarana ny matetika ho sidina roa isan-kerinandro dia dinihina izao.
Ny sehatry ny fitsangantsanganana an-tsambo dia mpandray anjara lehibe amin'ny indostrian'ny fizahan-tany any Honduras, satria nandray an-tapitrisany ny mpandeha fitsangantsanganana an-tapitrisany tamin'ny taona 2017 izay nampiseho fiakarana efa ho 5 isan-jato tamin'ny taona 2016. Vao tsy ela akory izay, Roatan dia nandray ny sambo fitsangantsanganana vaovao anisan'izany ny Kilalin'ny Olom-bahoakan'i Celebrity Cruises ', Viking Sky's Viking Sky ary TUI Cruises 'Mein Schiff avy any Alemana.
Fanandramana fizahan-tany vaovao
Raha Honduras dia malaza amin'ny toerana arkeolojika manaitra toa an'i Copan, ary ny antsitrika tsy manam-paharoa amin'ny morontsirak'i Karaiba, ny Birao fizahantany Honduras kosa izao dia manome lanja ny fampisehoana ny hakantony Birdwatching traikefa. Honduras dia iray amin'ireo firenena any Amerika Afovoany izay mampiseho ny tany arovana indrindra miaraka amin'ny faritra 121 ary misy karazam-borona mihoatra ny 770. Vao tsy ela akory izay, ny ezaka dia nifantoka tamin'ny fampiroboroboana sy fampiroboroboana ny serivisy natolotra ho an'ny Birdwatching, izay misy mpitari-dalana tsara sy mpandraharaha mpizahatany miavaka amin'ity faritra ity. Ireo tontolo iainana isan-karazany any Honduras dia ahafahan'ny mpitsidika mahita karazam-borona marobe ao anatin'izany ny papelika Ocellated, Motmot, Keel, Lovely Cotinga, Agami Heron ary Honduran Emerald Hummingbird.
The Làlan'ny kafe mpizahatany, izay ahafahan'ny mpitsidika mitsidika toeram-pambolena kafe ary mitsidika tanteraka ny fizotrany manomboka amin'ny voa ka hatramin'ny kaopy, dia traikefa iray hafa novolavolaina bebe kokoa. Nandritra ny taona maro dia nankalazaina noho ny kafe i Honduras ary tamin'ny taon-dasa, ny tsaramaso kafe nambolen'i José Abelardo Díaz Enamorado avy any Honduras dia voatendry ho "Tsara indrindra amin'ny tsara indrindra" tamin'ny Ernesto Illy International Coffee Awards 2017. Misy faritra enina hiaina ny làlan'ny kafe any Honduras: Copan, Opalaca, Montecillos, Comayagua, El Paraíso ary Agalta.
Miarahaba an'i Chef Executive vaovao ny High Hampton Resort
Paris no nitana ny laharana voalohany ho an'ny mpandeha eropeana, arahin'i Orlando sy New York